Qaybta Su'aalaha / Su'aal: Kooxda loo yaqaano Ambiverts?
« Last post by Ruu ali on November 10, 2019, 04:30:08 PM »
Kooxda loo yaqaano ambiverts maxay tahay?
Maxay se uga duwan tahay dabciga af_gaabnida?
Ama farqi noce ah ayaa u dhaxeeyo?
Inan wax ka ogaado ayan xisenayaa dabeecadahan
Cudurrada Guud / Re: Caabuqa Xiniinyaha (Epididymo-orchitis)
« Last post by Mohamed Cade yare on November 10, 2019, 01:16:06 PM »
Cudurrada Guud / Re: Cagaarshowga B (Hepatitis B)
« Last post by Kheyre on November 10, 2019, 01:15:07 PM »
Qaybta Su'aalaha / Re: Su'aal: Shaaha dumarnimada muu yareeyaa?
« Last post by SomaliDoc on November 10, 2019, 12:41:44 PM »
Maya, shaaha saameyn kuma lahan dumarnimada iyo ragannimada qofka....
Waxaa la sheegaa shaaha ugu qiimo badan dhinaca caafimaadka inuu yahay kan cagaaran, halkaan ka akhriso qoraal aan hadda ka hor uga hadalnay: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=6210.0
Qaybta Su'aalaha / Re: Su'aal: Waxaan ka cabanayaa biyo-baxa deg dega ah?
« Last post by SomaliDoc on November 10, 2019, 12:37:34 PM »
Biyo-baxa degdegga ah waxaa keeno dhowr arrimood, waxaad u baahan tahay in waraysi qoto dheer lagula yeesho, midda kale uurqaadista kuma xirno inaad dhakhso biyo-baxaysid iyo in kale, akhriso waxyaabaha ugu badan ee keeno arrintaan: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=2121.0
Qaybta Su'aalaha / Re: Su'aal: Waxaan leeyahay wareer xilliga durayga?
« Last post by SomaliDoc on November 10, 2019, 12:34:57 PM »
Badanaa fayrasyada keeno durayga ama ifilada waxay kaloo saameeyaan, xubin dhegta gudaheeda ku jirto oo qaabilsan balance-ga qofka, cilladaas waxaa loo yaqaanaa "Labyrinthitis", astaamaheedane waxaa ka mid ah wareer iyo guux dhegta ah.
Haddii cilladaan mar walba oo hargab kugu dhaco ay kugu soo laalaabato waxaan kugula talin lahaa inaad dhakhtar cunaha iyo dhegaha ku takhassusay la xiriirtaa si lagaaga fiiriyo dhegaha "ENT doctor", waxaa dhici kara inay jirto cillad kale.
Aqoon u yeelo waxyaabaha kale ee keeno wareerkaan aad dareemayso inuu dhulka kula wareegayo, sariirta kula gadoomayso ama guriga kugu soo dumi raboo kale ee loo yaqaano "Vertigo" iyo waxa ay kaga duwan tahay wareerka kale: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=6234.0
Qaybta Su'aalaha / Re: Su'aal: Cod xirmay ayadoo aysan jirin qufac?
« Last post by SomaliDoc on November 10, 2019, 12:30:13 PM »
Adigoo hargab iyo qufac iyo cuna xanuun toona lahayn, hadduu codka kaaga tago waxaa lagaaga shakkinayaa xanuunka ku dhaco xargaha codka qaabilsan ee cunaha ku jiro, cudurkaasoo loo yaqaano "Laryngitis".
Aqoon u yeelo cilladaha kale ee keeno xabeebta iyo codka oo luma: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=5327.0
Qaybta Su'aalaha / Re: Su'aal: Dhiigga AB+ ma ku badan yahay dalkeena?
« Last post by SomaliDoc on November 10, 2019, 12:27:45 PM »
Nooca dhiigga AB+ kuma badno bulshada, waana nuucii ugu dambeeyay ee la fahmo jiritaankiisa, dadka dhiigoodu nuucaan yahay waa nasiib badan yihiin oo dhiig kasta ayaa lagu shubi karaa...
Qaybta Su'aalaha / Re: Su'aal: Xiniinta ayaa la iga qabtay 4 sano ka hor?
« Last post by SomaliDoc on November 10, 2019, 12:22:46 PM »
Qaabka laguu hayo wuxuu iila eg yahay caabuq xiniinta ah oo kugu raagay, isagaane lagu gartaa xanuun illaa saracda soo gaarayo, xiniinta oo sii shuuqayso, cillada oo soo laalaabato, wixii faahfahin ah xanuunkaan ka akhriso link-gaan: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=8414.0
Talada aan ku siinayo waa inaad la kulantaa haddii aad awoodid dhakhtar ku takhassusay kaadi mareenka, qooraha iyo qanjirrada ku hareeraysan, kaasoo la dhaho "Urologist", isagaa ku caawin doona insha'llah.
Qaybta Su'aalaha / Re: Su'aal: Lugo xanuun jilbaha laabata seedaha?
« Last post by SomaliDoc on November 10, 2019, 12:16:05 PM »